इनार सुख गेल- विचार - कान्तिपुर समाचार
इनार सुख गेल
जल संरक्षणसंँग जोडिएको रैथाने ज्ञान समुदायले बिर्सियो । पानीको संकट देखापर्न थाल्यो ।
भाद्र २८, २०७५ चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — सिरहाको लहान– १५, मोहनपुरमा खानेपानीको सकस रहेछ । स्थानीय शकुन्तला लामाले सुनाइन्, ‘महिनाको सय रुपैयाँ तिरेर पनि थुतुना जुझाउनुपर्छ ।’ इनार सुक्दै जानाले मोहनपुरमा खानेपानीको समस्या भएको रहेछ ।
शकुन्तलाकी छिमेकी कमली सदा भन्छिन्, ‘इनार सुख गेल उराहैत–उराहैत, ओहुमे गदलाहा पानी कपडासे छान के पिली ।’ (इनार सुक्न थालेपछि मुहान खुलुन् भनेर भएभरको पानी झिकिन्थ्यो । तर त्यो पनि नभएपछि फोहोर पानी छानेर पिइन्थ्यो ।)
गाउँमा चापाकल लगाइयो । यसका अनेक झन्झट थिए । कहिले के भाँचिने त कहिले के । स्थानीय तहको चुनावपश्चात यहाँ दुइटा बोरिङ जडान गरिएको छ । तिनलाई स्थानीयले ‘कांग्रेसी’ र ‘एमाले’को बोरिङ भन्दारहेछन् । नगरप्रमुख एमालेका हुन् । उनले जडान गराएकोलाई ‘एमाले बोरिङ’ र कांग्रेसका तर्फबाट जितेका वडा अध्यक्षले जडान गराएको बोरिङलाई ‘कांग्रेसी’ नाम दिइएको रे । बोरिङको बिजुली खर्चबापत सय रुपैयाँ तिरेर पनि पानीका लागि लामो लाम बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सिरहा र सप्तरीको उत्तरी क्षेत्रमा मात्र होइन, तराईका विभिन्न हिस्सामा पानीको संकट देखापर्न थालेको छ । यो समस्या दुई तरिकाले आइराखेको छ । एउटा, सबै टोलमा पानीको बन्दोबस्ती सहज भएको छैन । ती ठाउँमा सफा पानी नभएको इनार वा टाढाबाट पानी लिएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । कतै–कतै कसैको सहयोगमा चापाकल वा बोरिङ जडान गरिएको भए पनि त्यहाँ अत्यधिक चाप छ । उत्तरी क्षेत्रमा इनार सुक्ने, चापाकलबाट पानी नआउने वा अत्यधिक गहिरो बोरिङ खन्नुपर्ने नियति भएको छ । दोस्रो, दक्षिणी क्षेत्रतिर पनि साविकभन्दा निकै गहिरो जडान गरिंँदामात्र पिउनयोग्य पानी निस्किने गरेको छ । यसले खानेपानीको प्रबन्ध खर्चिलो हुँदै गएको छ । ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बस्ती पानीका कारणले विस्तारै खस्किने अवस्था आउन सक्छ,’ सिरहा मिर्चैयाका निर्जला जीसी भन्छिन् ।
पानीको पहुँचमा वर्ग र वर्णको श्रेष्ठताले सीमा कोरेको देखिन्छ । खासगरी विपन्न वा दलितको पानीमा कमजोर पहुँच छ । दलित बस्तीमा सफा र सहज रूपमा पानीको प्रबन्ध हुनसकेको छैन ।
मधेस जंगल र जल संरचनामा सम्पन्न भूमि थियो । तर विकासलाई यसरी भित्र्याइयो कि यसले प्रकृतिको दोहनमात्र होइन, शोषणै गर्‍यो । तराईमा पानीको संकटको मुख्य कारण तराईको शिर चुरेको दुर्गति हो । चुरेमा जेजति नहुनुपर्ने काम भए, त्यसमा सरकार मुख्य दोषी छ । तराईलाई अन्नको भण्डार र बहुसंख्यक मानिसको आश्रय क्षेत्रका रूपमा चिनारी दिइए पनि पानीको स्रोतमा भएको विनाशले आउँदा दिनमा द्व्रन्द्व बढाउने देखिन्छ । त्यसको मुख्य कारण पानी माथिको पहुँच हुनेछ ।
विगतमा चुरे पर्वतलाई काठमाडौंले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले सम्वेदनशील मान्यो । उता समतलमा बस्नेहरूले यसलाई जलको संरक्षकका रूपमा स्थान दिए । हिमालयकी कान्छी बहिनी नाम दिइएको चुरे पर्वत शृङ्खलालाई ‘चुरिया माई’ भनियो । तर अहिले काठमाडाैं र समतल दुवैतर्फबाट चुरेमाथि प्रहार भइरहेको छ । अन्नको माइती भनेर चिनिने भूमिको स्वास्थ्य बिगारियो । चुरे क्षेत्रको वन फँडानी वा गिट्टी–बालुवा उत्खननले मात्र होइन, राजनीतिक प्रश्रय पाएर बढाइएको मानवीय क्रियाकलापले चुरेमाथि नकारात्मक प्रभाव बढायो । अहिले मदन भण्डारीका नाममा राजमार्ग निर्माणको चर्चा चलाइएको छ । त्यो चुरे क्षेत्रमाथि गरिने अन्तिम प्रहार हुनेछ । जबकि चुरेले तराई तथा भित्री मधेस र केही पहाडी जिल्लामा बसोबास गर्ने नेपालीको भविष्य आफूसंँग राखेको छ ।
मधेसतिर आहान थियो, ‘खेत बेपनिया जोतो तब, उपर कुँवा खुदाओ जब’ अर्थात किसानले पहिला इनार खनेर सिंचाइको समुचित प्रबन्ध गरिहालोस् अनि खेत जोतोस् । पाइला–पाइलामा पोखरी र इनार थियो । पानीको सहज प्रबन्धका लागि जल व्यवस्थापन यस क्षेत्रको संस्कृतिको अङ्ग बनाइएको थियो । नदीलाई निर्मल राख्ने त्यही मान्यताभित्र पथ्र्याे । इनार खनाउनुलाई कीर्तिका रूपमा त्यसै मानिएको थिएन । त्यसभित्र सामुदायिकताको मर्म लुकेको थियो ।
मधेसी समाजको प्रत्येक वर्ग पानीसँंग जोडिएको थियो । परम्परा, बानीव्यहोरा, उत्सव, रीतिरिवाज र मान्यतामा कहीं न कहीं पानी र त्यसको संरक्षणसँंग तालमेल देखिन्थ्यो । यस क्षेत्रको निर्माण र सञ्चालनको आधार पानी थियो । तर आज त्यही समाजमा पानीमाथि व्यक्तिगत अधिकारको दाबी गर्न थालिएको छ । पहिलाको मान्यता अनुसार चाहे त्यो पोखरी खनिएको होस् वा इनार, त्यसले पानीलाई सिङ्गो समाजको सम्पदाका रूपमा अथ्र्याउँथ्यो । जल प्रबन्धको पारम्परिक प्रक्रियामा सबैको समान अधिकार थियो । समाज पनि ती सम्पदा जोगाउन लागिपरेको थियो ।
पोखरीहरू हेर्दाहेर्दै मासिने र इनार पुरिने दृश्य देखियो । नदी लगातार प्रदूषित हँुदै गए । तराईका सुदूर देहातमा पनि बोतलबन्द पानीको खपत बढ्यो । जिल्लैपिच्छे पानी उद्योग खुल्न थाल्यो । एकातिर भूमिगत पानीको संकट छ भने अर्कोतिर पानीको बजार फैलिँदैछ । हेर्दा हेर्दै पानीको संकटले समाजलाई ग्रसित गर्न थालेको छ । प्रश्न उठ्छ, जुन समाज जल संरक्षणका लागि प्रसिद्ध थियो, आज त्यहीँ पानीमाथि पहुँचका लागि द्वन्द्व हुने अवस्था किन आयो ? किनभने जल संरक्षणसँंग जोडिएको रैथाने ज्ञानलाई समुदायले बिर्सियो । विगतमा यहाँको जल संरक्षण विचार निर्माण परम्परा अन्यत्रका लागिसमेत अनुकरणीय थियो ।
जनकपुरको हृदयस्थलीमा रहेको गंगासागर पोखरी प्रदूषित भएर सामाजिक कर्मसंँग अछूतजस्तै हुनथालेको थियो । समुदाय जुर्मुराए । पोखरी स्वच्छमात्र भएन, त्यहाँ दिनहँु हुने ‘महागंगा आरती’ जलसंँग जोडिने प्राचीन मैथिली संस्कृति पुनर्जीवित भएको छ । यसले देखाएका पक्षहरू के हुन् भने समुदायले आफूभित्रको ज्ञान कसरी व्युँतायो ? आफ्ना अमूल्य सम्पदाप्रति बेहोसीमा रहेको समुदाय फेरि कसरी व्युँझे ? समुदायले कसरी आफ्ना सम्पदालाई आफै जोगाउन सक्छन् ? यसभित्र लुकेका सामुदायिक ज्ञान स्वयं जनकपुरका लागिमात्र होइन, तराईका अन्य क्षेत्रमा पनि रचनात्मक संवादको माग गर्छ । बौद्धिक जुझारुपना चाहिएको छ ।
जलाशयलाई पुनर्जीवन दिने जनकपुरको सामुदायिक ज्ञानबारे जति बढी समाजशास्त्रीय ढङ्गले अध्ययन गरिन्छ, त्यति यस प्रयत्नको गरिमा बढ्छ । अन्यत्र पनि जल सञ्चयका प्रयत्नलाई टेवा दिन्छ । कुनै युग वा समयमा स्थापित उत्कृष्ट ज्ञान, प्रविधि, चिन्तन वा संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनु रूपान्तरणकै चरण हो । कनकाई खोलाछेउ होस् वा कमला वा कर्णाली नदीछेउ, समस्या, सम्भावना र सम्पदाका वस्तुमा थोरै भिन्नता हुन सक्छन् । तर समुदायमा रहेको ज्ञानलाई समस्यासँंग जोड्दा हल निस्कन सक्छ ।
एक समय थियो, घाम ताप्न पहाडबाट जाडोमा मानिस तराई झर्थे । अचेल शीतलहरले तराईमा कैयौं दिनसम्म सूर्यको दर्शन हुँदैन । तराई आएपछि मज्जाले नुहाउन पाइन्छ भनिन्थ्यो । तर यहाँका वासिन्दाले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएनन्, त्यो पनि गलत हुनेछ । तराईका उत्तरी क्षेत्रहरूमा कतिपय ठाउँमा बाध्यताले जीवनशैली फेरिन थालेको देखिन्छ ।
जलस्रोतको पूजा सामुदायिक जीवन र परम्पराको अंग थियो । जललाई आचमन गरिन्थ्यो । तर जब यो परम्परा भत्किन थाल्यो, पानीमा संकट देखिन थाल्यो । पानीप्रति उपेक्षा ठूलो चुनौती हो । आज तराईका वासिन्दालाई जति सफा, शुद्ध र सहज रूपमा पानीको आवश्यकता छ, त्योभन्दा बढी यस क्षेत्रको जंगल र चुरेलाई यहाँको वासिन्दाको त्यही पुरानो आत्मीयता खाँचो परेको छ । जेजति जोगिएको छ, त्यसलाई थप विनाश हुनबाट जोगाउन के यहाँका वासिन्दा ‘रक्षाकवच’ भएर उभिन तयार छन् ? के नेपाली संस्करणको चिपको आन्दोलन सम्भव छ ? के प्रत्येक स्तरमा हुने गरेको पानीको बर्बादी र चुहावट रोक्न सकिन्छ ? सुक्दै गरेका नदी, पोखरी र इनारलाई व्यँुताउन सकिन्छ ?
पानीको एक–एक स्रोतमा नजर, सुरक्षा र विवेकपूर्ण उपयोग समुदायको सर्वोच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । पानीप्रति अपनत्व र सम्मान जागरुक गर्न जरुरी छ । चुरेको फेदभरि फैलिएको चारकोसे झाडीमा अब धेरै वन बाँकी छैन । विभिन्न सरकारी निहुँमा चुरे र वनमाथि हुने प्रहार रोकिनुपर्छ । अब यहीँको समाजले अनेक भगीरथ पैदा गरौं । हामीभित्र भगीरथको भाव जगाऔँ ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०८:०८